Ugwu Caucasus: njirimara, geology, nhazi, flora na fauna | Netwọk Mgbasa Ozi
Otu n'ime ugwu kacha mara amara n'ụwa ka ewere dị ka nkewa kọntinent n'etiti kọntinenti Eshia na Europe bụ ugwu caucasus. Ọ bụ otu n'ime ugwu kachasị elu na Europe ma nwee ọtụtụ ọnụ ugwu karịrị mita 4.000 n'ịdị elu. Ugwu ugwu di na mpaghara a n'etiti Oké Osimiri Ojii na Osimiri Caspian. Akụkụ a dum nwere nnukwu asụsụ na ọdịbendị dịgasị iche iche ebe ọ bụ na ọ bụ ebe nzukọ maka azụmahịa n’etiti ndị mmadụ ihe karịrị afọ 2.000 gara aga.
Site n’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, mbido, ntọala na akụrụngwa nke Ugwu Caucasus.
2 Ngalaba nke ala nke Caucasus
3 Caucasus ihu igwe
5 Ifuru na umu anumanu
Mba isii nwere ụfọdụ ugwu na mpaghara ha: Georgia, Armenia, Iran, Turkey, Azerbaijan na Russia, na mgbakwunye na Autonomous Republic of Chechnya, Dagestan, Ayaria, Adygea, Ingushetia, Kabardia-Balkar, Karachay-Cherkesia, Nakhichevan na North Ossetia . Ndagwurugwu ndịda a bụ nke Armenia, Georgia na Azerbaijan na-achị, agbụrụ na asụsụ ha sikwa dị iche.
Kemgbe ọtụtụ afọ, agbụrụ dị iche iche na ndị pere mpe na-alụ ọgụ maka nnwere onwe ma ọ bụ nnwere onwe, na-eme ka mpaghara ahụ nwee nnukwu nsogbu na agha. N'oge Agha Caucasus nke 1817 ruo 1864, Alaeze Ukwu Russia jikọtara ọtụtụ mpaghara dị na mgbago ugwu, ma enweghi ike ijide udo ọbụna taa.
Ọ bụ ugwu, ọ bụ ezie na ịdị elu ya ga-ama nke Alps. Ná nkezi, ọnụ ọnụ ha na-adị elu, n’agbata 2.000 na 3.000 mita n’elu elu osimiri. A na-eme atụmatụ na e nwere ihe karịrị elu 20 na Caucasus nke dị elu karịa Mont Blanc, ugwu kasị elu na Alps. N’ụzọ dị iche, ugwu kachasị elu n’ugwu Caucasus bụ Ugwu Elbrus, nke dị ihe dịka mita 5.642 n’elu elu osimiri.
Ngalaba nke ala nke Caucasus
Usoro ugwu a sitere na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Europe ruo Eshia site n'ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ nke Oké Osimiri Ojii ruo Oké Osimiri Caspian, site n'ebe ọwụwa anyanwụ ruo n'ebe ọdịda anyanwụ. Obosara ya na-agbanwe agbanwe, ruo kilomita 160. Elu nke ugwu ugwu na-abawanye site na nsọtụ, ma ọ bụ n'akụkụ etiti ahụ ka a hụrụ ọnụ ọgụgụ kachasị elu, gụnyere Ugwu Elbrús.
A na-ekewa ya na mpaghara ya na Caucasus Ukwuu dị n’ebe ugwu na Little Caucasus na ndịda. Nnukwu Caucasus bụ akụkụ kachasị ukwuu na ugwu ugwu dị na sistemụ dum. O sitere na mpaghara Taman wee banye na Ala Absheron na Oke Osimiri Caspian ma kee ya ụzọ atọ: Western Caucasus, Middle Caucasus, na Eastern Caucasus. Onye Caucasus Ka Ukwuu na Obere Caucasus kewapụrụ site na ịda mbà n'obi Transcaucasus, nke bụ ndagwurugwu yiri ya na obosara nke ihe dịka 100 kilomita, nke jikọtara ụsọ Oké Osimiri Ojii na ụsọ Oké Osimiri Caspian.
Caucasus ihu igwe
Ihu igwe na ọnọdụ ihu igwe na-eme ka ọtụtụ ogologo ugwu ya tọgbọrọ n'efu karịa Alps. Ebe ndị dị nso na Osimiri Ojii dị udu mmiri karịa; N'ụzọ dị iche, Oké Osimiri Caspian kpọrọ nkụ na-eme ka mpaghara ọwụwa anyanwụ nwee ihu igwe kpọrọ nkụ ma ọ bụ ọkara ọzara. N'ugwu ọdịda anyanwụ ihu igwe na-aghọ subtropical, ya mere ọnọdụ ihu igwe na ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ bụ n'ezie na-abụghị.
Enwere glaciers na odida anyanwu na na etiti. Akara glacier na-amalitekarị n’etiti mita 2.800 na otu puku na narị anọ. Otú ọ dị, Nta Caucasus enweghị glaciers dị ka Great Caucasus. Obere ugwu ndị kewara nkụda mmụọ nke Transcaucasia na-abụ ihe mgbochi n’agbata ọnọdụ dị iche iche nke ebe ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ. Ejikọtara obere Caucasus na Great Caucasus site na Ugwu Lich Dị Nta, nkewapụrụ n'akụkụ ọwụwa anyanwụ n'akụkụ Osimiri Kura.
Ugwu ndị a emewo agadi. Ọtụtụ n'ime nkume ndị ahụ laghachiri Cretaceous na Jurassic, na ebe kachasị elu bụ Precambrian. Dị ka ọtụtụ ugwu n'ụwa, ọ bụ nkukota nke mbadamba tectonic na-akpụ ha; na nke a, site na efere Arab na Eurasia.
Ihe a malitere mgbe ndị Arab malitere ịkwaga ebe ugwu ruo mgbe ha ga-ejikọta ya na efere ndị Iran na Oké Osimiri Tethys. Njem ahụ dịgidere ruo oge ụfọdụ wee daba na efere Eurasia, nke welitere eriri ahụ n'ihi nnukwu nrụgide dị n'etiti ha. Ugwu Caucasus Ka Ukwuu bidoro ịkpụzi ugwu ndị dị obere n’obere Caucasus.
Na Cenozoic, obere Caucasus ugwu mgbawa nọ n'ọrụ. Ewezuga ugwu mgbawa ụfọdụ na mpaghara Absheron Peninsula, ugwu mgbawa ndị ka dị na mpaghara ugbu a adịkwaghị.
N'ihi na Ebe Ọwụwa Anyanwụ Caucasus nwere ihu igwe dị n'okpuru ala, ahịhịa dị ọtụtụ karịa nke Ebe Ọwụwa Anyanwụ Caucasus. N’ozuzu ya, e nwere ọzara, ala ahịhịa juru, ala ahịhịa ndị na-eto n’elu ugwu, apịtị, na oké ọhịa ndị dị n’akụkụ ugwu. Dabere na World Wide Fund for Nature (WWF), e nwere ihe karịrị ụdị ahịhịa 10,000 n'ime ọhịa agwakọtara, nke ihe karịrị 1,500 bụ ahịhịa na-ekpo ọkụ, ihe karịrị 700 vertebrates na 20,000 invertebrates. Western Caucasus bụ otu n’ime mpaghara ugwu ugwu ole na ole na Europe na-enwechaghị mmetụta mmadụ, ebe enwere ike ịhụ usoro dị iche iche dị na mbara igwe, otu n’ime ha bụ ala ugwu na ala ahịhịa juru nke naanị ụmụ anụmanụ bi.
N'ime oke ohia ya, enwere ihe kariri umu osisi iri, nke nke ihe karịrị 1,500 bụ osisi jupụtara na ya. Endemic flat bụ ndị pụrụ iche na ebe ahụ ma enweghị ike ịchọta ha ebe ọzọ. Ọ bụ osisi ndị a na-enyekwu uru dị iche iche nke ụdị ugwu a ebe ha bụ naanị ụdị anụmanụ ndị a. Ndị a bụ osisi ndị nwere ike ime mgbanwe maka ọnọdụ gburugburu ebe obibi a pụrụ iche ma enweghị ike ịchọta ebe ọ bụla ọzọ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ugwu ndị a nwere ọtụtụ akụkọ ntolite na akụnụba yana, yabụ, ụfọdụ n'ime ndị a kacha mara amara n'ụwa. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu ihe banyere Caucasus, njirimara ya na flora na fauna.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ugwu Caucasus